Nhau - CBE, CIPM show show iri kuuya, gadzirira. Sachigaro Mr. Zhang Kubvumbi. 19
CBE, CIPM yekutengesa show iri kuuya, gadzirira. Sachigaro Mr. Zhang Kubvumbi. 19
Muna Chivabvu gore rino, kune mairi akakosha ekuratidzira mumaindasitiri, imwe ndeye CBE Shanghai Runako Expo kubva Chivabvu 12 kusvika 14, uye imwe iri Qingdao National Pharmaceutical Machinery Expo kubva May 10 kusvika 12. NeMuvhuro manheru, timu yekutengesa yakaungana, uye mutungamiri Zhang wekambani akapa timu kudzidziswa nemusoro wekuti "wagadzirira here kuratidzira?"
Kudzidziswa uku kwakatora nguva ingangoita maawa maviri, zvinova zvakakwana kuratidza kukosha kwechiratidziro. Mutungamiri Zhang akapfupikisa uye akagovana ruzivo rwake rwekuratidzwa, uko kwakakamurwa zvakasiyana muchikamu chekutanga, panguva uye mushure mekuratidzira. SaMutungamiri Zhang achinongedzera kuti timu yazvino yekutengesa haina kujairana nezvakatemwa zvechigadzirwa, uye inofunga kuita iyo labeller inoshanda oparesheni makwikwi uye bhizinesi vashandi mharidzo vhiki ino.
Post nguva: Kubvumbi-28-2021
Yekutengesa Bhodhoro Kunyora Muchina, Label Printer Yezvizoro Zvirongo Mabhodhoro, Plaka yekuisa chisimbiso Machine, Syringe Assembly Uye Kunyora Sisitimu, Label Anonyorera Mashini Emabhokisi, Pamusoro Uye Pazasi Labeler,